Himalaya Dainik » फेरी ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति ?
फेरी ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति ?
काठमाडौ नेपालि बजारमा सुनको मुल्य फेरि पनि आकासिएको छ । तीन दिन सम्म ओरालो लागेको सुनको मुल्य फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आइतबार प्रतितोला १२ सय रुपैयाँ बढेर ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुनको मूल्य ह्वात्तै बढ्नुको कारण अमेरिका चीनबीचको व्यापार युद्ध रहेको छ ।
प्रकाशित मिति ९ भाद्र २०७६, सोमबार ०४:४३